Kurdiyiinta waa dad noocee ah? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Kurdiyiinta waa dad noocee ah?
Kurdiyiinta waa dad noocee ah?
Madaxwaynaha dalka Turkiga Raccep Tayyip Erdogan, ayaa maanta oo Arbaco ah booqosho rasmi ah ku tagay dalka Iraan, isagoo halkaasi wadahadallo ku aadan halsita aftida dadwayne ee maamulka Kurdiyiinta waqooyiga dalka Ciraaq ee loo yaqaano KRG– Kurdish Regional Government.
Taliyaha ugu sareeya ciidamada dalka Turkiga Hulusi Akar, ayaa ka mid ah wafdiga madaxwaynaha. Waxaana taasi ay ka dhigan tahay in Hulusi Akar, uu yahay sarkaalkii ugu sareeyay ee ciidamada qalabka sida ee booqda dalka Iraan tan iyo 1979.
Madaxwayne Erdogan, ayaa la kulmay dhiggiisa dalka Iraan Hassan Rouhani iyo hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalkaasi Ayatullah Cali Khameneyni, ayagoo ka wada hadlay arrimaha maamulka Kurdiyiinta iyo arrimaha ammaanka guud ee Barriga dhexe.
Booqashada Erdogan ee magaalada Tehran, ee xarunta dalka Iiraan, ayaa imaanaysa ayadoo dowladda Turkiga ay ka walaacsan tahay aftida gooni isu taagga Kurdiyiinta waqooyiga dalka Ciraaq.
Erdogan, ayaa isku dayaya inuu is hor-taago in KRG ay ka go’aan dalka Ciraaq, isagoo ka cabsi qaba in Kurdiyiinta dagaalka kula jira dowladda Turkiga ee BKK– Kurdistan Workers Party ay helaan meel gabbaad u noqota.
Wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa booqashada madaxwaynaha ka hor waxaa ay sheegtay in xukuumadda Ankara ay doonayso in xukuumadda Baghdad ay Kurdiyiinta kala wareegto dhammaan xudduudaha Kurdiyiinta ay la leeyihiin Turkiga.
Socdaalka Erdogan ayaa bilihii ugu dambeeyay la filayay, waxaana ajandiyaasha booqashadiisa Iran horay ay u ahayd, wadashaqaynta militari Iraan iyo Turkiga, la dagaalanka kooxda Daacish iyo aas-aaska goob nabdood oo laga hergalinayo Suuriya de-escalation zones . Hase ahaatee arimahaasi waxaa qariyay xiisadaha ka soo cusboonaaday waqooyiga dalka Ciraaq.
Khubarada Militari ee Barriga dhexe ayaa waxaa ay isku raacsan yihiin in Turkiga uu yahay midda ugu saamaynta badan marka laga hadlayo tallaabo waliba oo ku wajahan maamulka Kurdiyiinta.
Turkiga ayaa doonaya in cunoqabatayn lagu soo rogo KRG iyo inuu xaddido dhaqdhaqaaqa xudduudaha uu la leeyahay dhulka maamulka Kurdiyiinta.
Dadka kuriga ah waa qowniyad muslimiin ah gaar ahaan suniyiin u badan kuwaasi oo dega dhulka loo yaqaanay Mesopotamia, dhulkaasi oo taariikhdan Casriga ah koonfurta barri ee Turkiga, waqooyiga barri ee dalka Syria, waqooyiga dalka Ciraaq, Galbeedka Iraan iyo waqooyiga galbeed ee dalka Armenia.
Kurdiyiinta, ayaa ah qowmiyad lagu tilmaamo inay gaarayaan 30 ilaa iyo 40 million oo ruux, kuwaasi oo aan helayn dowlad madaxbanan oo ayaga u gaar ah. Tirada ugu badan Kurdiyiintu waxaa ay ku nool yihiin dalka Turkiga, kuwaasi oo lagu qiyaaso 15 million oo qof.
Previous articleWarbixin: Waa maxay sababta Booqashada boqorka Sacuudiga ee Ruushka?
Next articleAl-Bashiir: Maanta baahi wayn ayaan u qabnaa in aan garabkeenna ka aragno Soomaaliya oo midaysan